ဘာကြောင်. ကြေးစည်ခေါင်းလောင်းတို.ကို သုံးရသနည်း ? | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
ဘာကြောင်. ကြေးစည်ခေါင်းလောင်းတို.ကို သုံးရသနည်း ?
Posted by shannnews at 9:18:00 PM0comments
ပြည်တွင်းသတင်း . ဆောင်းပါး
ကြေးစည်ခေါင်းလောင်းတို့ကို ဘာသာရေးကိစ္စ၌ သုံးရသည်၊ အမျှအတန်းဝေရာ၌ ထိုးခေါက်ရသည်-ဟု နားလည်ပါသည်၊ သို့သော် အသုဘချရာ၌ ကြေးစည်တီးသည်ကို မြင်တွေ့နေရပါသည်၊ ဘာသာရေး- သုံး ကြေးစည်ကို အဘယ်ကြောင့် အသုဘတွင် တီးသည်ပါသနည်း။
( ဖြေ ) ခေါင်းလောင်း၊ ကြေးစည်၊ ထိုးစည်များကို ဘာသာရေးကိစ္စများတွင် သုံးစွဲကြရာ ၌ခေါင်းလောင်းသံ ၊ ကြေးစည်သံကြားလျှင် သာဓုအနုမောဒနာ ပြုကြရန် ရည်ရွယ်ပါသည်၊ဒါနပြုရာ၌ ဒါန၏အဖို့ကို ရယူနိုင်စေရန် ကြေးစည် ခေါင်းလောင်းဖြင့် အမျှဝေကြသည်၊ ကြေးစည် ခေါင်းလောင်းသံ ကြား၍ သာဓုခေါ်လျှင် ဒါနကောင်းမှု၏ အဖို့ဘာဂကို အမျှရသည်။သီလ၌လည်း ထို့အတူပင်။
အသုဘ၌ အသုဘသို့ လာသူ၊ မသာပို့သူတို့သည် ငါလည်း ဤကဲ့သို့ သေရဦးမည်-ဟု မရဏာနုဿတိ ဘာဝနာကို ပွားကြရသည်၊ မသာပို့သူတိုင်း၏ တာဝန်မှာ ထိုသို့ မရဏာနုဿတိ ဘာဝနာပွားခြင်း၊ အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်း နှလုံးသွင်းခြင်း စသည်ဖြင့် ရှုပွားရသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း ပြုရမည့် တာဝန် ၀တ္တရားပင် ဖြစ်သည်၊
အောက်ထစ်ဆုံး သုဘလုလင်နှင့် သူငယ်ချင်း သူဋ္ဌေးသား ၅၅-ဦးအလောင်းအလျာများကဲ့သို့ ဤအသုဘ အပုပ်ကောင်ကြီး လူကြားသူကြားထဲမှာ ထား၍မလျော်၊ သုသာန်သင်္ချိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ကြကုန်အံ့-ဟူသော လူမှုရေး ကုသိုလ်စိတ် ထားရှိကြရသည်၊ ထိုကုသိုလ် ကောင်းမှုများကို ကြားသူ မြင်သူတို့ သာဓုခေါ်၍ ကုသိုလ်အမျှယူနိုင်ရန် အသုဘများတွင် ကြေးစည်တီး၍ ချပို့ကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။